Tsy afaka mifanohitra amin'ny Won't. Martech Zone
Talata, Novambra 30, 2010 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Natokako ny ankamaroan'ny olana hitako tamin'ny orinasa tsy afaka mifampitaha amin'ny tsy. Tiako ny miasa miaraka tsy afaka. Halako ny miasa tsy.
tsy afaka mety midika zavatra be dia be. tsy afaka dia mety vokatry ny loharano, ny fitsipika, ny fanabeazana na ny fahefana. Rehefa tsy nahatratra tanjona satria io tsy afaka vita, tsy nahomby ianao… zavatra tonga teny an-dalana. Vantany vao esorinao ny sakana, hahomby ianao.
dia tsy dia hafa. dia tsy mitarika tsy fahombiazana. dia tsy mitranga noho ny tahotra, ny avonavona, ny avonavona, ny hakamoana na ny tsy fifandraisan-davitra. dia tsy midika fa azo natao ny tanjona, saingy olona nanakana.
Tamin'ny andro voalohany naha mpitantana ahy dia nisedra olana foana aho tsy afaka mifampitaha amin'ny tsy miaraka amin'ireo mpiasako. Tsy fantany na tsia ilay olana tsy afaka na ny tsy nahatonga ahy handalina lalindalina kokoa amin'ilay mpiasa hahitako ny antony tsy nahombiazanay.
Gaga aho matetika nahita mpiasa te-hahomby, saingy tsy afaka noho ny fitsabahan'ny antoko fahatelo. Indraindray gaga aho satria izaho no zavatra eny an-dalana. Vantany vao nesorinay ny fanelingelenana dia nahazo ny fandresena foana izahay.
Rehefa tsy tratra ny tanjona noho ny tsy, hafa be ny fizotrany. Ireo dia mpiasa nila nesorina satria izy ireo dia ny fanelingelenana sy ny sakana amin'ny fahombiazana.
Tsy miova amin'ny orinasa ny tantara. Misy orinasa izay tsy afaka ary ireo no mpanjifanay ideal. Azontsika atao ny manome azy ireo loharano, paikady ary fanabeazana ary manampy azy ireo hamaky. Mampalahelo fa nihaona tamin'ny orinasa izay koa izahay tsy. izy ireo tsy mihainoa, ry zareo tsy miova, izy ireo tsy mampihatra ireo loharano ilaina, na izy ireo tsy satria mihevitra izy ireo fa mahalala bebe kokoa.
We tsy afaka manampy ireo orinasa izay tsy.
Tags: orinasa ho an'ny mpanjifamedia sosialy iraisam-pirenenaBoky fivarotanaSearch Marketinguberflip hubstatistikan'ny marketing amin'ny horonan-tsary
Ny fahafatesan'ny masoivohon'ny firaketana